Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण भ्रममा नपरौं, सबै मिलेर कोरोना विरुद्ध संघर्ष गरौं : डा. मोनिषा कार्की
भ्रममा नपरौं, सबै मिलेर कोरोना विरुद्ध संघर्ष गरौं : डा. मोनिषा कार्की
१२ चैत्र २०७६, बुधबार १८:३०
विश्वमा सवा चार लाख मान्छेमा सक्रमण सरेको र झण्डै १९ हजार मान्छेको ज्यान लिएसकेको कोरोनाको बारे नेपालमा अनेक भ्रमहरु सोशल मिडियामा आइरहेको थियो । यती सक्रमित छन उति छन । सरकारले बिरामीहरु लुकाइराखेको छ । नर्भिकमा कोरोना बाट मान्छे मरे, सेनाले राती हेलिकप्टर बाट किटनाशन औषधि छर्कदै छ। भन्ने खालका कुराहरुले जनमानसमा आतंक फैलिरहेको थियो । यता माक्स सेनेटाइजर मेडिकलहरुमा पाउन कठिन भैसकेको थियो । ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य सामाग्री अभाव हुन थाली सकेको थियो ।
१९९९ को डिसेम्बरमा चाइनामा देखिएको यो संक्रमण झण्डै ८० हजार संक्रमित र ३२ सय मान्छे गुमएर निकै कठिनाइका साथ तीन महिना पछी मार्च २०२० आफू मुक्त भएको घोषणा गर्ने चरणमा चिनीयाहरु थिए । यता सरकारले भ्रमण वर्ष जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम रद्ध गर्दै संक्रमण फैलिएको देशहरुबाट नेपाल आउने भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सम्पूर्ण जनसमुदायलाई भोज, भत्तेर सभा समारोहमा सहभागी नहुन र अति आवश्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको थियो । औषधि, माक्स, खाद्यान्न संकट गराउने ब्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गर्दै कार्बाही गर्दै थियो । सोशल मिडियामा अफवाह फैलाउने ब्यक्तिहरुलाई पनि गिरफ्तार गरिरहेको थियो ।
चाइनाले कोरोना नियन्त्रणमा पूरा शक्ति लगारहँदा त्यसलाई गम्भीरताका साथ नलिने इटाली र स्पेन जस्ता देशमा परिस्थिति भयावह बन्दै थियो । कोरोनालाई चाइनिज भाइरस भनेर जिस्काउने ट्रम्पको देश अमेरिकामा यो ठूलो चुनौती बन्दै थियो । यो महामारीमा अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्व देखाउन नसक्ने हो भने संसारबाट उसको साम्राज्य समाप्त हुनसक्छ भनेर बिद्वानहरुले बिष्लेशण गरीरहेका छन ।
गत ७ गते शुक्रबार साझ छ बजे प्रधानमन्त्री ज्यूले राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्नु भयो । देशका अतिआबस्यक सेवा बाहेक सबै बन्द गर्ने र कोरोना संक्रमण नेपाल भित्रन नदिन सचेत हुने अव्हान गर्नु भयो । अघिल्लो दिनबाट सुरु हुने एस ई ई परिक्षा सरकारले स्थगित गरिसकेको थियो भने भक्तपुर जिल्लमा पनि बिपद ब्यबस्थापन समितिको बैठक बसी जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, स्वास्थकर्मीहरुको सयुक्त पहलमा विभिन्न योजना बनाइएको थियो । खरिपाटी क्वारणटायन उपडेट गर्ने, म कर्यरत नागरिक सामुदायीक अस्पताल लगाएत अस्पतालमा २५ बेड आसोलेसन वार्ड स्टाण्डबाई राख्ने र जन चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको थियो । भारतमा पनि महाराष्ट्र लगाएतको स्थानमा संक्रमन फैलिन थालेको र आधादर्जन ब्यक्तिको मृत्यु भैसकेको कारण नेपालमा झन खतराको अबस्थामा आइपुगेको थियो । दुई दिन अघाडी सार्क राष्ट्रहरूले भिडियो कन्फरेन्स मर्फत मिटिङ्ग गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउँदै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
नौ गते स्वस्थ्य मन्त्रालयले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर फ्रान्सबाट आएको एउटा १९ बर्षे युवतीमा कोरोना सक्रमण दिखिएको जानकारी गरायो । सोहिदिन सरकारको निर्णयबाट मुलुक लक डाउन गर्ने निर्णय आयो । सम्पूर्ण जनतालाई घरभित्र बस्न आव्हान गरियो । स्वास्थ संकटको बेला सरकारले गरेको यो निर्णय सर्वत्र स्विकार्य थियो । स्वभबिकै यस पछि हाम्रो काँधमा थप जिम्मेवारी आइपर्यो किनकि यो महामारीबाट विजय हासिल गर्ने भनेको स्वास्थ्यकर्मी खटने आम जनता घरमा बस्ने नै हो । यो रोगको विरुद्ध कुनै औषधि बनि नसकेकोले संसारका सबै देशले यही तरिका अपनाएका थिए ।
समग्र घटनाक्रम म एउटा डक्टरको हैसियतले नियाली रहेको थिए । अब हाम्रो थप र बिशेष भुमिका आवश्यक छ भनेर अस्पताल ब्यबस्थापन समितीको बैठक बोलाएर बिशेष योजना बनाइरहेका थियौं । कोही बिदामा नबस्ने जुनसुकै बेलामा सक्रमण हुन सक्ने भएकोले ज्यान जोखिममा लिएर भएपनि सेवामा खटने दरिलो मन बनाएको थियौं । सबै स्वास्थकर्मी झै मैले पनि । मान्छेहरूलाई हात धुने, माक्स लाउने सेनेटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता विषयमा सचेत गराउन सांसद महेश बस्नेत, समाजसेवी गोपी नेउपाने, राजनीतिज्ञ वचन देउजा, खेलकुद बिकास समितिको अध्यक्ष भक्त कासिछ्वा अभियान्ता मदन घिमिरे, रुद्र पौडेल, नरेश रन्जित लगाएतहरुसँग सल्लाह र सहकार्य गरि नागरिक अस्पताल, नागरिक उपचार कोष, माछापुच्छ्रे बैंक, हेल्दी हर्ट जस्ता निकायसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रम कौशलटार गठ्ठाघर लगाएतको स्थानमा संचालन गरिएको थियो । नागरिक अस्पतालका डेपुटी सुपर्टेन्डेट डा. अशोक राई र हामीले मिलेर सन्देशमूलक भिडियो सामाग्री बनाएर प्रचार गर्न थलिसकेका थिंयौ ।
अब हामीलाई विभिन्न चिनजानका मान्छेबाट फोन आउने क्रम सुरु हुन थाल्यो । कतिपय बिरामी जो अस्पताल वा डक्टरकोमा जान सक्दैन थिए । उनीहरु हामीबाट परामर्श चाहान्थे । म मेरो ब्यबसायीक जेवनमा बिरामीले सदैब हामीबाट लाभ लिउन भनेर सचेत रहन्थे अहिले पनि म प्रतेकको कल उठाइरहेको छु र आफ्नो ज्ञानले जाने सम्मको परामर्श दिई रहेको छु । यता औषधि र स्वस्थ सामग्रीको अभाब हुने स्थिती देखिदै थियो । हामेले यो बारेमा पनि केहि काम गर्नु पर्दछ भनेर नागरिक उपचार कोष र जिल्ला खेलकुद समिति र मेरो निजी लगानीमा ३ पिस पी पी सुठ किन्ने निर्णय गरियो । नागरिक अस्पतालले पनि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न थालेको छ ।
साँझ आमाको फोन आयो र कुराकानी भयो । चाईनाको डाक्टरहरुले हात हल्लाउँदै गरेको दर्दनाक घटना र इटालिका स्वास्थकर्मीमा देखिएको सक्रमणको कुरा गर्दै सचेत हुदै दह्रो मन बनाएर सेवा गर्ने समय आएको छ । हामीले तिमीलाई पढाएर ड्क्टर बनाएकोमा गौरवान्बित छौं । लाग छोरी देशको लागि खट । सांच्चै आमाको त्यो हौसलाले जस्तो सुकै अबस्थामा पनि सेवा गर्ने आत्माविश्वास पलायो । भोलि पल्ट बिहानै मेरो आत्मीय साथीसँग कुरा भयो पूर्ण हौसलाका सथ खटनु भारतमा डाक्टर, नर्सहरुलाई कोठाबाट निकालेरे कति पय ब्यक्तिले बुजेर नबुजेर अपमान गर्न सक्छन उच्च मनोबलका साथ खटनु । आमा र साथीको यो उच्च हौसलाले निकै मनोबल बडायो ।
घरबाट अस्पताल जानै कठिनाई, खानपिन देखि दैनिक जीवनको समस्याको चुनौती सामना गर्दै न्यून तलब खाएर खटेका मेरा मित्रहरु चाउ चाउ चपाँउदै अस्पतालको कार्यकक्षमा अफुहरु माथी टोल समाज छिमेक र घरभेटीहरुले हेर्ने नजर फेरिएको कुरा सुनाउँदै थिए । म यो संकटको घडिमा आह्वान गर्दछु, हामी सबै मिलेर काम गरौं । कोही घर बाट ननिस्किउ । हामी स्वास्थकर्मी जस्तो सुकै अबस्था सामना गर्न तयार छौं । भ्रममा नपरौ आधिकारिक सुचना मात्र पत्याँउ । डाक्टर, नर्स, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सहज किसिमले काम गर्न दिउँ । उनीहरुलाई हौसला प्रधान गरौं । कसैको अपमान नगरौं । अनावश्यक संका नगरौं । सरकारले चालेका सबै प्रयासमा साथ दिउँ । कोरोना विरुद्धको महान युध्द हामी अबस्य जित्नेछौं ।